Madaxda Sacuudiga ayaa kadambaysay dilka Khashoggi | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Madaxda Sacuudiga ayaa kadambaysay dilka Khashoggi
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa markii ugu horraysay waxaa uu dowladda Sucuudiga si toos ah ugu eedeeyay dilka weriye Jamaal Khashoggi.
“Waxaannu ognahay in amarka lagu dilay Khashoggi inuu ka soo baxay madaxda ugu sarreysa ee dowladda Sucuudiga,” ayuu ku qoray maqaal ku soo baxay wargeyska the Washington Post.
Balse Erdogan ayaa sheegay inuusan rumaysnayn in Boqor Salmaan uu arrintaasi ku lug lahaa.
“Waannu ognahay in dadka ka dambeeyay dilka ay ka tirsan yihiin 18-ka qof ee laga shakisan yahay ee lagu hayo gudaha dalka Sucuudi Carabiya,” ayuu ku qoray wargeyska the Washington Post, halkaas oo ah warbaahintii uu Khashuggi wax ku qori jiray.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku baaqay in “dadkii ka dambeeyay dilkii Khaashuqji” bannaanka la soo dhigo.
Jamal Khashoggi ayaa waxaa 2-dii bishii Oktoobar lagu dilay qunsuliyadda Sucuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul.
HALAKN KA AQRI SHEEKADAN